Bit By Bit - The n'ọdịnihu - 7.2.1 Ngwakọta nke njikeremades na omenala
Enweghi usoro eji eme ihe di njikere ma obu usoro eji eme nke oma ka ejiji ike nke oge dijitalya. N'ọdịnihu anyị na-aga ịmepụta ụdị ụfọdụ.
N'okwu mmeghe, m na-atụle ụdị ejiji nke Marcel Duchamp na ejiji nke Michelangelo. Ụdị ọdịiche a na - ewepụkwa ọdịiche dị n'etiti ndị ọkà mmụta sayensị data, bụ ndị na - arụ ọrụ na njikeremades, na ndị ọkà mmụta sayensị, ndị na - arụ ọrụ na omenala. N'ọdịnihu, Otú ọ dị, m na-atụ anya na anyị ga-ahụ ụdị ngwakọ ọzọ n'ihi na nke ọ bụla n'ime ụzọ ndị a dị ọcha dị oke. Ndị na-eme nchọpụta bụ ndị na-achọ iji naanị njikeremades ga-aga n'ihu n'ihi na ọ bụghị ọtụtụ ndị dị njikere njikere n'ụwa. Ndị nchọpụta na-achọ iji nanị omenala, n'aka nke ọzọ, na-aga ịchụ àjà. Otú ọ dị, ngwakọ na-abịakwute, nwere ike ijikọta ọnụ ọgụgụ nke na-abịa na njikeremades n'ụzọ dị mkpa n'etiti ajụjụ na data nke sitere na omenala.
Anyị na-ahụ ihe atụ nke ndị a adọ ụdị ụfọdụ na nke ọ bụla n'ime isi anọ dị n'isi. N'isi nke 2, anyị hụrụ otú Google Flu Trends si jikọta usoro data siri ike (ajụjụ ọchụchọ) na usoro ọdịdị ọdịnala nke nwere ike ịnwe (usoro CDC influenza surveillance system) iji mepụta atụmatụ ngwa ngwa (Ginsberg et al. 2009) . N'isi nke atọ, anyị hụrụ otú Stephen Ansolabehere na Eitan Hersh (2012) jikọtara data nyocha nke omenala site na nchịkọta nchịkọta nke gọọmentị dị njikere iji nwetakwuo ihe gbasara àgwà nke ndị na-eme ntuli aka. N'isi isi nke 4, anyị hụrụ otú nchọpụta Opower si jikọta ihe eji emepụta ọkụ eletrik eji eme ihe na nhazi nke a na-eme nke ọma iji mụọ ihe ndị na-eme ka mmadụ na-akpa àgwà ọjọọ nke nde mmadụ (Allcott 2015) . N'ikpeazụ, na isi nke 5, anyị hụrụ otú Kenneth Benoit na ndị ọrụ ibe ya (2016) tinye otu ìgwè ndị a na-eme omenala aka-usoro ntinye edeba na ngosipụta nke ihe ngosi nke ndị ndọrọ ndọrọ ọchịchị mere ka ha nwee ike ịmepụta data ndị na-eme nnyocha nwere ike iji mee nnyocha banyere usoro nke arụmụka iwu.
Ihe atụ anọ a niile na-egosi na atụmatụ dị ike n'ọdịnihu ga-eme ka nnukwu ihe ọmụma data, nke na-abụghị maka nchọpụta, na-eme ka ha dịkwuo mma maka nnyocha (Groves 2011) . Ma ọ na-amalite site na ejiji ma ọ bụ nke a kwadebere, ụdị ngwakọ a nwere nnukwu nkwa maka ọtụtụ nsogbu nyocha.